प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १६, २०७४ समय: ९:२१:४८
काठमाडौं, १६ फागुन । संविधान संशोधन सुनिश्चित गरेर संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन आज सहमति हुने एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताएका छन् ।सोमबार सत्तारुढ दल र फोरमबीच भएको छलफल निष्कर्षउन्मुख रहेको र आज सामान्य छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने नेम्वाङले बताए ।
‘फोरम सरकारमा जानेबारे छलफल निष्कर्षउन्मुख भएको छ । बुधबार करिब एक घन्टा छलफल भएर सहमति हुनेछ,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधानको कुन–कुन विषय संशोधन गर्ने सहमति दुवै पक्षले मस्यौदा बनाएर बुधबार टुंग्याइनेछ ।’
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न एमाले विगतदेखि नै लचक रहेकाले फोरमसँग सहमतिनजिक पुग्न सहज भएको पनि उनले बताए । फोरमले कति र कुन मन्त्रालय पाउने टुंगो पनि आजै लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो विषय टुंग्याउनेछन् ।
फोरम सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मंगलबार एमाले नेता नेम्वाङ र फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा रामसहाय यादवबीच छलफल भएको थियो ।
आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने
सरकार र फोरमबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आजै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना छ । फोरम दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुने मौखिक सहमति भइसकेको छ । आज लिखित सहमति भएसँगै तीनवटै पार्टीका बाँकी मन्त्रीलाई आजै शपथ खुवाउने योजनामा प्रधानमन्त्री छन् ।
प्रदेश २ को सरकारमा वाम गठबन्धन
केन्द्र सरकारमा फोरम सहभागी भएपछि प्रदेश २ को सरकारमा वाम गठबन्धन भित्रिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । फोरम नेता डा. शिवजी यादवले संविधान संशोधनसहित सरकारमा सहभागी हुनेबारे चारबुँदे सहमति हुन सक्ने बताए ।
‘हामीले त चारवटा मन्त्रालय माग गरेका थियौँ । अन्तिमसम्म दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा सहमति हुने संकेत देखिन्छ,’ यादवले भने, ‘केन्द्रमा हामी सहभागी भएपछि प्रदेश २ को सरकारमा उहाँहरू पनि जाने गरी सहमति हुन सक्छ ।’
फोरमबाट को बन्लान् मन्त्री ?
फोरमलाई पराराष्ट्र मन्त्रालय दिन एमाले र माओवादी तयार भइसकेको स्रोतले बतायो । परराष्ट्रको नेतृत्व फोरमबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै गर्ने बताइएको छ । फोरमले शिक्षा र श्रम मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रेणु यादवको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा छ ।
तर, फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुँदा मन्त्रालय थप्नुपर्ने या एमाले र माओवादीले पाएको भागबाट एक–एकवटा कटौती गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै मन्त्रालयमा फोरमलाई समेट्ने निश्चित भए माओवादीले टुंग्याएको मन्त्रीको नाममा एकजना कटौती हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । माओवादीले कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो पनि लगाएको छैन ।नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।